musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Olivier Giroud Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; "Anoshamisira". Our Olivier Giroud Childhood Story pamwe nes Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvekwanisiro ake asi vashomanana vanoona Olivier Giroud Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Olivier Giroud akaberekwa musi we 30th weSeptember 1986 muChambéry, kumaodzanyemba kumabvazuva kweFrance.
Kubva paudiki hwake (kubva kune akwegura 6), Akava nehanya nebhokisi nekuda kwehama yake mukuru, Romain Giroud uyo ane makore 10 ari mukuru.
Olivier akanga akazara nekutya kwekukundikana kunyange asati atanga basa rake. Izvo zvakaitika apo akaona hupenyu husinganzwisisiki kune basa rehama yake. Hanzvadzi yake yakangosarudza kurega bhora kuti ive mutevedzeri wezvokudya. Roma akaita kuti vabereki vake vanyadzwe nokuti vakakundikana kuisa muenzaniso wakanaka.
Kunze kwekutya kwemabasa, muduku Olivier aityawo 1980s comedy character 'Alf' paakanga achiri muduku. Akambotaura pamusoro pekuti vakuru vake vakashandisa sei kugara vachimutuka pamusoro pekutya kwevakawanda-vanoda sitcom star.
Pasinei nehuwandu hweAlf hunoshamwaridzana, vechidiki Olivier vakanga vasingafariri kutarisira kwechisikwa chacho.
Paakabvunzwa pamusoro pechinhu chaaityisa zvikuru, Giroud akati: 'Mukoma wangu aive akajaira kundinyengedza pamusoro pevana vana TV inonzi Alf. Ndakanga ndichitya kwazvo iye nokuti akanga asina kunaka. Mukoma wangu aiwanzoti, Chenjerera, Alf achakuwana iwe manheru ano! ' Akaenda nechokure nahwo!
Mushure mokupa mazano akawanda anokurudzira, vechidiki Olivier vakasarudza kupa bhora kuedza. Izvo zvaakazoita kuti atore kudzoka kwakarasika mumhuri yake iyo yaimboonekwa "Mhuri yevheti"
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Career in Summary
Olivier Giroud akakurira mumusha waiva pedyo weFroges, pedyo neGrenoble. Akatanga basa rake rebhora richimhanya kubhizimisi rake rokumusha, Olympique Club de Froges.
Akapedza makore matanhatu achidzidzira pachikwata asati ajoka nekambani yechikwata Grenoble panguva ye 13.
Takaona zvakaitika kuna Romain, uye akatumirwa chikwereti kuna Istres muchechi yechitatu, yakange iri kugogodza shure apo boka rake rakamutengesa, achitaura kuti akanga asina unhu hwokutamba nevakuru.
Olivier Giroud aitya kwazvo izvi. Mumashoko ake .... "Ndaifanira kutora njodzi yokutangazve mubato rezasi," anodaro. "Asi handina kumborega."
Olivier akagamuchira kurwadziwa kwake ndokuita kuti chikamu chekuzvikudza kwake uye chigadzirwa. Akazvimanikidza kuti ave nani.
Akazodzidza Tours mu2008. Muchikamu chechipiri paTurs, iye ndiye aikonzera mutsaridzi wepamusoro ne 21 zvinangwa. zvichiita kuti aende kune rumwe rutivi rwomhanya-mhiri Montpellier.
Muduku Olivier Giroud- Basa Rakaitika
Giroud akanga ari zvakare muchengeti wepamusoro ne 21 vavariro mumwaka we 2011-12, achipa chikwata chacho chinyorwa chekutanga cheLigue 1 vasati vadzokera kuArsenal. Vamwe vose sezvavakagara vachitaura, vakanga vane imba yavo yakashamwaridzana.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Mishumo yakaratidza kuti Olivier Giroud anouya kubva mumhuri yepakati pemhuri. Chinyanyozivikanwa pamusoro pababa naamai vake sezvavakasarudza kuramba zvachose kubva kune vhidhiyo.
HANZVADZI KONAMA: Sezvambotaurwa kare, Olivier ane hanzvadzi yakwegura, Romain, uyo aivawo mutambi wenhabvu. Akatamba pachikoro cheAuxerre ndokumirira France pasi pe-15 uye pasi-17, pamwe chete nevatambi vakadai Thierry Henry, David Trezeguet uye Nicolas Anelka, asi akazoguma achidonha basa raizogona kuva chiremba kudzidza nekuva chikafu chekudya.
Olivier anoyeuka. "Akanga akadzidziswa kuAuxerre, aive netariro, asi haana kumbova nebasa rekushanda". Romain akadzokera kunodzidza, uye akava mutevedzeri wezvokudya.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Giroud akaroora Jennifer kubvira 2011.
Olivier Giroud uye Wife Jennifer
Mwanasikana wavo Jade akaberekwa muna June 18, 2013.
Mwanasikana waOrivier, Jade Giroud akaita baba vake kuti vaone kuti zvakaoma sei kuvabereki. Olivier Giroud uyo akanga asina kumboshandisa vana aifanira kutanga nguva yakawanda yekusimudzira nekusimbisa hutano hwepanyama, hwemagariro, hwemagariro evanhu, uye hwepfungwa.
MunaNovember 2015, Olivier naJennifer Giroud vanoita kuti Jennifer abate pamuviri mutsvuku we Global Gift Gala muLondon. Musi waMarch 7, 2016, Jennifer anozvara mwana mukomana anonzi Evan. Giroud anopa zvinangwa zvake kumwanakomana wake, Evan waanoda.
Sezvakaitwa MunaOctober 2017, vaviri vacho vakanga vachitarisira mwana wechitatu.
MunaFebruary 2014, kushora kwakasvibisa mufananidzo waOrivier Giroud. Inosanganisira kubudiswa kwemifananidzo inonyengera, mupepanhau reChirungu zuva rega rega Zuva. Ichi chifananidzo inoratidzira ukama hwomukatikati pakati peOrivier Giroud naCelia Kay, muenzaniso wemayeri.
Izvozvi, Muna February 2014, Giroud akaudzwa kuti akabvuma kuti akabiridzira mudzimai wake nemuenzaniso Celia Kay.
Mushure mechiitiko chacho, akakumbira ruregerero kumudzimai wake asi akazosimbisa kuti haana kuita upombwe. Wenger haana kutaura pamusoro penyaya iyi achiti aida "Kuremekedza zvaanoita".
Celia Kay akatora nguva yake kuti apindure kune vatsoropodzi pamusoro pehupfumi.
Vose Giroud nemudzimai wake vakagadzirisa dambudziko racho uye pakanga pasina ruzivo rwezvekurambana kwavo.
Raheem Sterling, Edinson Cavani uye Anthony Martial yave ichibatanidzwa mukunyengedza zvipfeko sezvakaita Olivier.
Giroud ane mukurumbira Furanzi nokuda kuva unhu unofadza uye wakanaka. Muna 2014, akazova chiso che Hugo Boss's Boss Bottled kunhuwira kwevanhu.
MunaFebruary 2015 Giroud akavhota 'Hottest Premier League Player'. Mubvunzurudzo pamwe GQ, akadaro David Beckham sekufuridzira nzira yaanoona, achitaura kuti Beckham's "Chimiro chiratidzo".
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -chitendero
Giroud muKaturike uye ane tattoo kuruoko rwake rworudyi kubva munaPisarema 23 muchiLatin: "Dominus regit me uye nihil mihi deerit" ("Ishe ndiye mufudzi wangu; ini handidi").
Anozvitsanangura pachake se "Munhu anotenda chaizvo [...] Handifaniri kuenda pamberi pemitambo yangu asi ndinonyengetera zvishoma mumoyo mangu"
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Bromance neKoscielny
Giroud naKoscielny vaifambidzana navo muTours FC mumwaka we 2008-09. Ndivo vaviri vasingatauriki avo vanogara pamwe chete muimba yekupfeka, bhazi, mapikicha emapoka, kudzidziswa, tennis uye kunyange kudya kwemanheru. Mushure mekunge adzokera kuArsenal, Giroud akati Arsenal ibhuro rinoshamisa rine mudzidzisi mukuru weFrench, uye bro "Loo" iri kutamba ikoko zvakare.
Koscielny anonziwo iyo "Bosscielny" or "Kos the Boss," pakati pevadzidzi vake nevakomana.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Chimiro cheMutambo
Giroud anokwanisa kutamba munzvimbo dzakasiyana siyana dzinonyangadza, asi kazhinji anoita semurosi kana sepakati-mberi. Akavewo dzimwe nguva akashandiswa semutsotsi wechipiri. Mushandi anoshanda zvakaoma, anozivikanwa kunyanya nokuda kwezvaanovimbisa chinangwa chechikwata, kukura, simba, kutungamirira kunyatso, simba rakapfura, kukwanisa kubata bhora nemusana wake kuenda kune chinangwa, nekubatanidza-up play. Anobatanidzwawo nekuita kumhanyira kumberi kwepamberi izvo zvinoparadza vadziviriri
Olivier Giroud's incredible 'scorpion kick ' waiva mutsigiri we Chinangwa che 2016 / 2017 Season.
Kana ukaongorora basa raGiroud nemanhamba, uchaona kuti Giroud yakaridza nguva dzose mumakwikwi ake akapfuura pasina kukuvadza kwakakomba kuisa. Iwe uchafanirwa kuva neDNA ye Park Ji-Sung, Dirk Kuyt uye Ox (mhuka, kwete Oxlade-Chamberlain) kuti urambe uine mafungiro akadaro.
Arsenal's French International Giroud inova vateveri vekunakidzwa sezvo vachisangana neGunners mu2012. Mazhinji mafamu akatevedzera vhudzi rake. Vamwe vakapinda mumatambudziko semwana ari pasi apa.
Uyu mukomana ane makore mapfumbamwe akamborambidzwa kubva mukirasi nokuti akaveura vhudzi rake seAsensen nyota Olivier Giroud.
Danny Purdy akatumirwa kumba nemisodzi mushure mekunge ataurirwa mutsva wake mutsva, kumashure uye kumativi emafudzi akavhara mitemo yechikoro.
Mudzimai wake, Sarah akatyisidzira kuti amubvise kubva ku Brooklands Middle School kuLeighton Buzzard, Bedfordshire, zvachose. Amai-ve-vaviri Sarah, 33, vaifanira kukumbira chikoro chezvinhu kuitira kuti awane mudzidzisi Danny kubva kumba kusvikira rutsva ruchigadziriswa.
Akati: "Zvechokwadi hatina kufunga kuti bvudzi rakadai saDanny riri kuputsa mitemo. Chero bedzi vana vakapfeka junifomu yechikoro zvakanaka uye vachishanda zvakaoma kuchikoro, ini handioni chaizvo chinetso chacho. Ini zvirokwazvo handizogoni kumira uye ndinovatarisa kuti mwanakomana wangu anzwe semunhu akadzingwa uye amurega kubva pane zvidzidzo. Ndaigara ndichifunga kuti tinofunga nehupfungwa dzedu uye kwete vhudzi redu, asi zvakajeka kwete. "
Zvisinei, mutungamiri Steven Harrington-Williams akadzivirira mutemo wechikoro. Akati: "Chii chakaitika aive kuchikoro nechikamu chikuru chevhudzi rake akaveurwa sezvakaita Olivier Giroud. Yakanga iri pedyo nechepamusoro apo nguva yose yakanga yakareba. Hatitarisiri rudzi rwakadaro rwechitsuwa muchikoro. "
Danny Purdy akazoyeuka mushure mekuveura ndebvu kubva paO Olivier Giroud mutsvuku wesvondo uye chidzidzo chekudzidza pamusoro pemitemo yegadziriro yevana vechikoro.
Wissam Ben Yedder Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts